Kylian Mbappe Oo Si Cad U Doortay Kooxda Uu Ku Biiri Doono Xagaaga Dambe – Liverpool, Man United mise Real Madrid? – Laacibnet.net
Kylian Mbappe Oo Si Cad U Doortay Kooxda Uu Ku Biiri Doono Xagaaga Dambe – Liverpool, Man United mise Real Madrid?
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa toddobaadkan horraantiisii waxa uu kooxdiisa u sheegay inuu ka tegi doono xagaaga dambe marka uu suuqa iibku furmo, isla markaana aanu kordhin doonin qandaraaskiisa oo waqtigaas sannad kali ahi ka hadhsanaan doono.
Kylian Mbappe oo heshiiska uu kula jiro PSG uu ku egyahay June 2021 waxa uu doonayaa inuu dibedda uga baxo Faransiiska sannad ka hor waqtiga dhamaadka qandaraaskiisa, haddii ay kooxdiisu diiddo inay iibisana waxa uu si xor ah kaga tegi doonaa sannadka 2022 iyadoo ay markaas da’diisu noqon doonto 23 jir.
Kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa hore iskugu dayay inay lasoo saxeexdaan xilligii uu Monaco joogay, waxaana naadiyada ku taamayay ee ku guul-darraystay ka mid ahayd Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City iyo kuwo kale. Kooxahan ayaa wali raadinaya sidii ay u heli lahaayeen Mbappe oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan waqtigan dunida.
Kaddib markii uu go’aankiisa Kylian Mbappe u gudbiyey PSG, waxa soo baxaya naadiyada ku tartamaya saxeexiisa oo ay mid waliba uga dheeraynayso tan kale, si u hordhigaan mashruuc qancin kara oo saxeexiisa ay ugu guuleysan karaan.
Laakiin laacibkan ayaa markii uu PSG u sheegayay go’aanka waxa kale oo uu u raaciyey kooxda uu doonayo inuu tago, taas oo dhinac u ridaysa tartankii loogu jiray.
Sida uu sheegay wariye Josep Pedrerol oo ka hadlayay telefishanka El Chiringuito TV, Kylian Mbappe waxa uu ku riyoonayaa inuu u ciyaaro Real Madrid oo uu rumaysan yahay inay ka caawin doonto inuu ku guuleysto abaal-marinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or.
Wariyuhu waxa uu sheegay in Mbappe uu ku wargeliyey naadigiisa in damaciisu yahay inuu u dhaqaaqo waddanka Spain oo ay riyadiisuna tahay inuu xidho garanka Real Madrid.
C/kariin qaasin cabdi says:
Wala hubaa in uu ku gulysan karo ballon d ro
Osaame cabdicasis daahir says:
Mbappe mahadal saxpaa inuu imaa naayo kooxda real madrid mise turufo waye
Jama Mahad says:
Waa ku guulaysan karaa hadii riyadisu u rumowdo ee ah inuu Real Madrid ku biiro